As of Fri, 18 Oct, 2019 13:00
नेपला धितोपत्र बोर्डले स्टक डिलरको काम छिट्टै सुरु गराउने भएको छ । बोर्डले सेयर बजारमा धितोपत्रको माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम गर्नका लागि स्टक डिलरको आवश्यकता औंल्याउदै अनुमति दिने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-७७ का लागि धितोपत्र तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमका लागि सुझाव संकलन गर्ने क्रममा बोर्ड अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीले स्टक डिलरको अनुमति दिने काम अघि बढेको जानकारी दिएका हुन् । बुक बिल्डिङ विधि प्रयोगमा ल्याउने योजनाअनुरूप बोर्ड अघि बढेको उल्लेख गर्दै डा. कार्कीले भने, “भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्विटी लगायतका विशिष्टीकृत लगानीकोष सञ्चालन तथा नियमनका लागि कानुनी वातावरण तयार भएको छ ।” आगामी दिनमा स्टक डिलरको काम गर्न इच्छुक संस्थालाइ अनुमति दिने कार्य अगाडि बढाइने उनले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का प्रमख कार्यकारी अधिकृत चन्द्रसिंह साउदले प्राथमिक बजारजस्तै दोस्रो बजारलाई समेत प्रविधिमैत्री बनाइएको बताए । “पछिल्लो समयमा स्टक डिलरको मोडालिटी तयार भएको हुनाले डिलरको बजार प्रवेश सम्बन्धमा बोर्डको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न सहज बनाउनु पर्ने सिंहको सुझाव रहेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा बोर्डका पूर्वअध्यक्ष बाबुराम श्रेष्ठले जलविद्युत् क्षेत्रको नियमनका लागि बोर्डले सो क्षेत्रको नियमन निकायसँग आवश्यक समन्वय गर्नुपर्ने बताए । म्युचुअल फण्डको लगानी क्षेत्रसम्बन्धी नियमावलीमा रहेको व्यवस्थामा थप स्पष्ट बनाउनु पर्ने श्रेष्ठले सुझाव दिए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक कुलप्रसाद पाण्डेले सरकारी तथा नियमाक निकायहरूको नीतिगत अस्थिरताका कारण धितोपत्र बजारले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताए । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्न बोर्डले नियमन तथा सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्ने पाण्डेले बताए ।
कार्यक्रममा उपप्राध्यापक वासुदेव उपाध्यायले वस्तु विनिमय बजारको विकासका लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत पूर्वाधारका लागि शीघ्र पहल गर्नुपर्ने बताए । अर्का उपप्राध्यापक डा. बलराम चापागाईंले सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी गतिविधिहरूलाई समसामयिक तथा गुणात्मक बनाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
मर्चेन्ट बैकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष प्रवीणरमण पराजुलीले बिमा कम्पनीहरूसँग रहेको दीर्घकालिन कोष परिचालनका लागि परिवर्तनशील ऋणपत्र तथा अग्राधिकार सेयरको निष्काशन तथा प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताएका छन । नागरिक लगानी कोषका रोशनजंग कार्कीले स्टक डिलरको सम्बन्धमा आवश्यक कानुनी व्यवस्था शीघ्र गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । सेयर लगानीकर्ता दीलिप मुनंकर्मीले लगानीकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, सूचनाप्रवाहमा शुद्ध, एकरूपता एवं पर्याप्त हुनुपर्ने र नेप्सेले आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
लगानीकर्ता संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले धितोपत्र बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउन ठोस व्यवस्था गन सुझएका थिए । सूचीकृत कम्पनीले वार्षिक साधारणसभा समयमै नगरे कारबाही गर्ने तथा साधारणसभालाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले धितोपत्र बोर्डको सुपरिवेक्षणलाई गतिशिल एवं आधुनिक बनाउन समेत सुझाए ।